सभामुखमा पूर्व एमालेबाट सुवास नेम्वाङ कि माओवादीका देव गुरुङ ? उपसभामुख तुम्बाहाङफेको पद धरापमा Canada Nepal
सभामुखमा पूर्व एमालेबाट सुवास नेम्वाङ कि माओवादीका देव गुरुङ ? उपसभामुख तुम्बाहाङफेको पद धरापमा
आश्विन १६ २०७६
प्रतिनिधि सभा नेतृत्वविहीन भएपछि सभामुखको दाबेदारीको रुपमा सत्तारुढ नेकपाभित्र विभिन्न नेताहरुको नाम अगाडि सारिएको छ । बलात्कारकोआरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले दिएको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको छ । महराले राजीनामा दिएसँगै विभिन्न सांसदहरुको नाम चर्चा चले पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नेताहरुको फरक फरक दाबेदारी देखिन थालेको छ ।
महरालाई सभामुख बनाउँदा दलीय भागबण्डामा गरिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीले भागबण्डा गरेर सभामुखमा महरा र उपसभामुखमा डा. शिबमाया तुम्बाहाङफेलाई निर्वाचित गराइएको थियो । महरा माओवादीको कोटामा थिए भने तुम्बाहाङफे एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएकी हुन् । अहिले दुवै पार्टी एक भएर नेकपा गठन भएको र यसबीचमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, पूर्वसहमति र शर्त सभामुख चयनमा लागू नहुने पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरुले बताउन थालेका छन् । यस कारण तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । पूर्व एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङको नाम अघि सारिएको छ । उनी यसअघि पनि सभामुख भइसकेका छन् । नेम्वाङ कानुनकाज्ञाता पनि हुन् । यस कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन पक्षमा छन् ।
तर, नेम्वाङको नाम अस्वीकार गर्दै पूर्वमाओवादी पक्षधरले एकै व्यक्ति दोहो¥याउने भन्दा पनि नयाँ अनुहारलाई पालो दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपी नेम्वाङको नाम अस्वीकार गरेको पूर्वमाओवादीले ओनसरी घर्तीको नाम सुरुमा अगाडि सारे पनि उनका पति वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री रहेकाले घर्तीलाई नबनाउने पक्षमा पुगेको छ । देव गुरुङको नाम एक नम्बरमा राखेको पूर्व माओवादी पक्षधरमा अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम पनि चर्चामा ल्याएको छ ।
आश्विन १६, २०७६ बिहिवार ०७:४८:०० बजे : प्रकाशित
सरकारलाई नेकपाले भन्यो– छिटो संवैधानिक अंगहरूमा पदपूर्ति गर
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले रिक्त संवैधानिक अंगहरुमा छिटो पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले सरकारलाई चाँडै रिक्त संवैधानिक अंगहरुमा प्रक्रिया पूरा गरेर पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले संवैधानिक अंगहरुमा छिटो पदपूर्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
साथै सोही बैठकले १० दिनभित्र पार्टी एकीकरणको बाँकी कामसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको छ ।
आश्विन ६, २०७७ मंगलवार १६:१९:४५ बजे : प्रकाशित